Ndi Apollonius nke Tyana bu “ezi” Kraist? - AFRIKHEPRI
Apollonius nke Tyana ọ bụ "ezi" Kraịst?
Jiri ụzọ nsị dị mfe nke Tamarind rụọ ọrụ ma na-edozi mgbaze
Wenezde, Mee 27, 2020
Apollonius nke Tyana
A oge Kraịst nke Oziọma ndị ahụ dịrị ndụ, enwere ọtụtụ “Christs” ndị ọzọ na Asia Minor na ndị nọ nso East, nke a bụ ma ọ dịkarịa ala ihe na-akpọsa akwụkwọ na-akpali akpali, nke Robert Laffont dere site n'aka onye edemede Pararis. , Egiptologist, Jean-Louis Bernard. Akwụkwọ a, isiokwu ya bụ: "Apollonius nke Tyana na Jizọs", gbadoro ụkwụ na akwụkwọ ọgụgụ buru ibu nke mejupụtara akụkọ ndị dị mkpa banyere Jizọs, ọrụ ọhụụ, akaebe oge ochie, na ọrụ kachasị, ụdị ozi ọma. n'ụzọ nke ya: "Ndụ nke Apollonius nke Tyana" site n'aka onye edemede Greek bụ Philostratus, amụrụ na Lemnos gburugburu afọ 175 AD. Otu narị afọ mgbe ọ nwụsịrị, Philostratus dere akụkọ banyere ndụ ya na arịrịọ Julie, onye ọkà ihe ọmụma. Ọ bụ nanị akwụkwọ zuru ezu nke enwere ike ịchọta na Apollonius nke Tyana. Amụrụ otu afọ ma ọ bụ abụọ tupu mmalite nke oge Ndị Kraịst, na Tyana sitere n'aka nne na nna azụmaahịa bara ụba nke nyere ya agụmakwụkwọ siri ike, Euthydemus bụ Nna-ukwu mbụ ya. Nkpughe ya chere na akpata oyi wụrụ ya, maka Nna-ukwu nke abụọ, Euxene. Ọ kụnyere n'ime Pythagoras nkuzi ya, ọ bụkwa mgbe nkuzi ya gasịrị, na Apollonius na-eto eto kpebiri ibi ndụ dịka Pythagorean. Ọnwụ ya mere mgbe ọ dị afọ 98 ma ọ bụ afọ 99. Ọ na-apụ n'anya na-enweghị ọnyà, na-enweghị onye akaebe, nke na-agbakwunye ikike karịrị nke ndụ ya. Apollonius nwekwara ndi neso uzo ya, ndi ozi ya, ya onwe ya bu onye neso uzo nke Pythagoras na onye nketa nke ihe omimi nke Egypt. Okwesiri iburu n’uche n’oge ahụ, a na-ejikarị okwu ahụ bụ “Kraịst”: n’asụsụ Grik, “Çhrestos” na “Christos” pụtara: “ndị dị mma, ndị e tere mmanụ”. Ma okwu a si na nkwuputa okwu wee nweta site na Egypt hieroglyphic "khery-cheta". "Onye nke kachasi ihe nzuzo", "ibido".
Ugbu a, Apollonius bụ otu n'ime ndị ahụ malitere, ụdị onye na-asọ mpi nke onye Aramaic Jizọs onye ọdịnala anyị nke Ndị Kraịst "ejikọtara" onwe ya. Apollonius, mara mma nke Pythagoras. "Naanị m bụ mmadụ, ma mmadụ niile nwere ike, site na iche echiche na nkà ihe ọmụma, bilie chi. Ebube na ebuli elu, ahịrịokwu a na-ezukọ ma kwupụta ihe dị na Vers d'Or. Ọ dịghị onye ọkà ihe ọmụma ọzọ, Apollonius, soro Pythagorean wee chee echiche nke ọma. Apollonius na-egosi n'ụzọ doro anya ozizi nke ndị Sage nke Samos. Ejiri uwe linin, ghara iri anụ, ọ na-etinye onwe ya maka iwu niile nke ndụ bụ ozizi nkuzi nke Philosophical. Enweghị afọ ojuju n'ịnọpụta mgbanwe nke omume, ịhazigharị njehie na mmejọ nke ndị ụkọchukwu, Apollonius na-akwụ onwe ya ụgwọ site n'inye ndị ya na ha dị ndụ ihe oyiyi nke amamihe. Ọ chọrọ inye ihe atụ nke onye ọ bụla nwere ike ịmụta. Mmetụta e meere ndị ya na ha dịkọrọ ndụ na-egosipụta ha nke ukwuu. N'oge ndụ ya, a na-asọpụrụ ya dị ka Chineke, na-atụ egwu maka ike ya dị ebube ma nwee mmasị maka àgwà ọma ya. Ọ na-agbasi mbọ ike ịnọgide na-akụzi ozizi Pythagorean na ofufe nke chi ndị oge ochie. Ìgwè mmadụ, na-achọsi ike mgbe nile maka mmegharị ngosi, na-ekpebi ikpezi nke nkuzi ha mgbe ọ bụla na-ahụ maka ihe ndị dị ebube ha. Akuku nke oru ebube ya di otua na otutu afo adigh ike idi ike nke Apollonius na Kraist. Okwu ya na-emegidekarị nke Kraịst ma ọ bụghị ikwubiga okwu ókè ikwu na okpukpere abụọ sụgharịrị site na ọdịmma ha. Mmetụta nke Apollonius na-adịgide adịgide. Narị afọ anọ mgbe ọ nwụsịrị, a nọgidere na-asọpụrụ nsọpụrụ. N'ezie, Apollonius ghọrọ onye a ma ama na n'oge a kpọrọ ya "onye ọrụ ebube nke alaeze ukwu ahụ".
Otú ọ dị, ozugbo Oziọma ndị ahụ gbasasịrị, a chụpụrụ ya n'ọchịchịrị, ebe e bu ụzọ mara Aramaic Kraịst. Chọọchị, tinyekwara ike ya nile n'ime ya site n'ịtụkwasị obi na Oziọma anọ anyị maara (ọ bụ ezie na e dere ha n'oge); site na ime nke a, o jiri aka ya chefuru ọtụtụ akwụkwọ apọkrịfa (nke a na-enweghị njikarị!!), nke na-akwadoghị ndụ Jisọs "dị ka achọrọ", ezigbo, ọdịdị na nkwenye. Apollonius, na narị afọ mbụ nke oge anyị, ka a kpọtụrụ aha na ndị Gris na Rom. Ntak otu cabal di omimi ghotara ya, nke ahu bu ihe anyi na-eche taa. Ndi Iso Ụzọ Kraịst nwere mmadụ abụọ? Akụkọ ha abụọ ọ gbakọtara n'okpuru aha otu? N'ọnọdụ ọ bụla, nsogbu nke mmekọrịta dị n'etiti ihe abụọ ahụ bụ nke dị mkpa. Apollonius a na-ekwu okwu na-achụso ndụ pụrụ iche, na-agafe obodo ya, Rom, Alexandria, Antiọk, ma na-agbaso ọchịchọ ya maka amamihe na Egypt na India.
N'ebe ọ bụla ọ na-agafe, ọ na-eme ihe ndị dị ebube bụ ndị bụ ihe omimi ya, na nke a na-akpọ ọrụ ebube. Ọ na-adịgide adịgide ma na-abụkarị onye anaghị eri anụ. Ọ na-aga ụkwụ efu, yi uwe linin, ma kpaa ogologo ntutu. Mgbe nna ya nwụsịrị, ọ na-ekere òkè ya, hapụrụ nwaanyị ahụ. Ruo afọ ise ọ gafere site n'obodo ruo n'obodo, mechie ọnụ. Mgbe ahụ ọ maliteghachiri n'ihu ọha, na-atụgharị uche banyere chi na ndị nchụàjà, na ndị na-eso ụzọ asaa n'akụkụ ya. Na njem ya, ọ na-ewe ndị ohu abụọ na onye na-ede akwụkwọ. Na Ninive, o zutere Damis, onye Asiria nke ga-ekwesị ntụkwasị obi nye ya ruo mgbe ọ nwụrụ. Eze ukwu bụ Domitian, bụ onye kpọrọ Apollonius asị, tụrụ ya mkpọrọ ma mee ka a mara ya ikpe. Ọ na-agbapụ, anyị na-efunahụ ya. A chọtara ya n'Efesọs ebe ọ nwụrụ mgbe o mere agadi. Dị ka Aramaic Kraịst, ọ na - egosi "ọnọdụ nkwụsị" ọtụtụ ugboro nakwa n'ọtụtụ ebe, nke na - eme ka ọ bụrụ onye a ma ama n'etiti ìgwè mmadụ. Oke ama, kwa-asọpụrụ ruo n'ókè na St. John Chrysostom, hounds megide ya ka 4e narị afọ, na-achụso ya calumnies na-emeso ndị ọzọ, onye aghụghọ na imp of Satan? Obu ihe di mkpa, igbutu Grik a bu "Kraist" maka mkpa nke ihe kpatara ya. Aha Apollonius nke Tyana nwere nnukwu nsogbu. Apollonius bụ, ọbụna ndụ ya, ọ bụghị nanị na-asọpụrụ dị ka a maara ihe, ma na-atụ egwu site na ụfọdụ dị ka a dibịa afa, hụrụ n'anya ndị ọzọ dị ka chi, ma ọ bụ ọ dịghị ihe ọzọ na-asọpụrụ dị ka a ozo. Na Chọọchị mbụ, aha ya, n'oge ụfọdụ, pụtara ihe ize ndụ. Na iri na asatọ na narị afọ, mgbochi Christian polemic chere ọ hụrụ na ndụ nke a na-agwa ohere aghụghọ ọgụ. Taa chi pụrụ, ndị ọkà ihe ọmụma tụfuru ya akporo, ọ na-anọgide of Apollonius of Tyana na ọrụ ebube. Mgbe e gosipụtara ya ka ọ bụrụ n'ihu Pythagoras na onye iro Jizọs Kraịst.
The omimi Jesus - Apollonius Nke a bụ nnọọ omimi nta mara ihe mere eme, dị ka ọ na-ekpuchi fọrọ nke nta eluigwe na ala version nke ndụ Jizọs, nke bụ ma ejighị nnọọ n'aka dị ka akụkọ ihe mere eme data dị ụkọ na-emebi emebi; mana nsụgharị ọ bụla dị ka ihe arụ. Iji mesoo isiokwu a yiri ka ọ dị m mkpa, ọ dịghịkwa ihe ọ bụla ga-ewepụ ozi ọma nke Jizọs. Ndị Nna Chọọchị nwere mgbe niile mara na ụzọ Jizọs na Apollonius of Tyana strangely nwere njikọ chiri anya, ụfọdụ ha egwu ruo n'ókè nke na-elekwasị anya na-ebibi aha nke Apollonius na impersonate onye ozi nke Demon. A mụrụ Apollonius afọ anọ tupu oge Ndị Kraịst, n'emeghị ka ọ mara ya n'ime afọ ole na ole. Nke a bụkwa ihe banyere Jizọs. N'ezie, ọ dịghị ihe na-ekwu na a dịghị amụrụ ha n'otu oge ahụ. Dika Jisos, amuru ya "mara ọkwa". Nne ya Pentah nwere nrọ nke chi Proteus onye kpugheere ya na ya onwe ya ga-etinye n'ime nwata ahụ ọ na-echere. Ọ dịghị n'ọgba nke Apollonius batara n'ụwa ma n'ọhịa, ebe Penthea dara n'ụra; swans nọ na-agbakọta gburugburu ya, jiri nwayọọ nwayọọ na-akụ nnukwu nku ha, ka egwu Chineke wakporo ebe. Mgbe ọ tetara, nwa ahụ ka amụrụ, ọkụ wee daa n'ụkwụ ya. Na asaa, a na-enye ya onye nduzi; na iri na anọ, ọ hapụrụ Tasọs (ebe ọ matara Pọl), wee gaa Aegae, ebe ọ na-amụ ihe n'ụlọ nsọ nke Asclepios ebe ọ hụrụ onyinye ya nke ọgwụgwọ na nyocha.
Onye maara ihe, ọ nabatara Pythagorean asceticism. Ọ bụkwa onye doro anya, onye dibịa afa, onye ọkà mmụta okpukpe. Dị ka Jizọs, Apolloni kwuru okwu n'asụsụ Aramaic, asụsụ a na-asụ na Kapadoshia. Ma o kwukwara okwu n'asụsụ Grik kasị dị ọcha na nke oge ochie. Ma banyere Jisos, o natara baptism na olulu mmiri di omimi nke miri ya nwere udi nma dika nke nke Jordan. Mmekọrịta ahụ anaghị akwụsị n'ebe ahụ; Mgbe ọ bụ nwata, mgbe ọ dị afọ iri na anọ, nne na nna ya kpọgara ya Tasọs wee gaa Pagamọm, n'obodo Aegae, bụ ebe a na-akpọ Aesculapius nke a ma ama. Dị ka Jizọs n'oge ọgbọ ahụ, ya na ndị ụkọchukwu na-akparịta ụka, ndị na-eju ya anya na amamihe ya. Site na 12 ruo 30, Oziọma ndị ahụ adịghị agbachi nkịtị banyere ndụ Kraịst. Omenala na akwụkwọ ndị dị na asụsụ Pali na-akọ na o jiri "afọ ndị furu efu" na East. Ọ bụ n'otu oge ahụ ka Philostratus, bụ odeakụkọ nke ndụ Apollonius nke Tyana, mere ka ọ gaa India na Himalaya. Ọ na-agafe mba ebe ndụ mmadụ na njikọ nke chi dị anya; levitate dị nsọ, ọ na-ekere òkè n'ememe na ụda nke ihe ndị ọzọ, ọ na-eto eto na amamihe na amamihe. O yiri ka Jizọs na Apolloni ahụ zutere na Tibet.
N'ihe gbasara 30, Jizọs na Apolloni na-achọpụta n'otu oge ahụ na ndụ ọha mmadụ. Nke mbu na agbasawanye nkuzi ya ma na-amụba ọtụtụ ọrụ ebube maka afọ atọ. Apollonius mere otu ihe ahụ; Ọ na-agwọkwa, na-akpọlite ​​ndị nwụrụ anwụ ma na-akpagbu. Oziọma ndị a na-akọ na-akọ akụkọ banyere ọnwụ Jizọs n'elu obe, mbilite n'ọnwụ ya na ịrịgo ya mgbe ụbọchị iri anọ gasịrị. Mana enwere ihe akaebe ndi ozo na Jisos gbapuro onwu wee biri ogologo oge. Ihe ndi a abughi asusu di iche iche, ma omenala siri ike nke kwesiri nyocha. Ihe odide kachasị emetụta ya na India. A ka ga-asọpụrụ ya n'ebe ahụ, ili ya dị na Srinagar, na Kashmir, bụ olili nke ụfọdụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ na-enyekwa Apollonius. N'ezie, nke a, mgbe afọ 33 gasịrị, nọgidere na-ebi na Gris ma ghọọ otu narị afọ, mana anyị amaghị ihe ọ bụla banyere njem ya ikpeazụ nke nwere ike ịduga ya na Himalaya.
Apollonius nke Tyana, onye ọkà ihe ọmụma nke na-agbanwezigharị nke narị afọ nke XNUMX AD: ọmụmụ dị oke egwu: nke naanị akwụkwọ ndị dị na Apollonius nke Tyana
14,60€ dị na ngwaahịa
3 ọhụrụ site na 14,60 €
dị ka Mee 27, 2020 9:30
Part Number black & ọcha atụ
Ụbọchị mwepụta 2013-06-01T00:00:01Z
Publication Ụbọchị 2013-06-01T00:00:01Z
Ihe atụ nke ifuru lotus
Sudan nke gum arabic, spark nke ndụ ma ọ bụ coca-cola uba?
"Ndị Africa, ka anyị ebilie!": Nkwupụta Patrice Lumumba kwuru, Machị 22, 1959